Beledweyne oo laga hirgaliyay Leyrarka cadceedda ku shaqeeya – Radio Muqdisho
Beledweyne oo laga hirgaliyay Leyrarka cadceedda ku shaqeeya
Guddoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa xarigga ka jaray mashruuc Leyrarka cadeedda ku shaqeeya looga hirgalinayo qeybo ka mid ah waddooyinka magaalada Baladweyne.
Waddada dhex marta magaalada ayaa lagu rakibay leyrarkii ugu horreeyay, ayadoo la gaarsiin doono waddooyinka kale, taas oo wax badan ku soo kordhin doonta bilicda magaalada .
“Waxaan ka mahad celinayaa ciddii noogu deeqday, waxaan rajaynayaa in waddooyinka magaaladu ay wada iftiimaan, ganacsiguna uu habeenkii socdo, Baallahaan qofkii wax u dhima waxaan u aqoonsanaynaa cadow” ayuu yiri guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cabdifitaax Xasan Afrax.
Wuxuu uga digay gaagdiidleyda inay jabiyaan ama aad gawaarida ku dhuftaan leyrarkaan, ayadoo ganaax uu muteysan doono qofkii jabiya ama dhibaato u geysta.
Magaalooyin badan oo ku yaalla gobollada dalka ayaa la gaarsiiyay mashruucan oo suurta galinaya in magaalada la iftiimiyo ayadoo la adeegsanayo leyrar cadceedda ku shaqeeya, waxaana markii ugu horreysay laga bilaabay waddooyinka magaalada Muqdisho.
Dhagayso Warka Subaxnimo 07.03.2015